Abavelisi beemitha ze-Smart-abaThengi baseTshayina abaMbane, abaFundi
Isigaba esine-wire-wire-wire / phase-phase ezintathu-wire-metres sisebenzisa isekethe enkulu edityanisiweyo kwaye isebenzise umlinganiselo wamandla ombane ochanekileyo. Ukubanakho kwemodyuli yonxibelelwano kunye nokuthembeka nako kufikelele kwinqanaba lokusetyenziswa okusebenzayo. Yamkela itekhnoloji yokuphanda isampulu yedijithali kunye nenkqubo ye-SMT, kwaye yenzelwe kwaye yenziwa ngokokusetyenziswa kwamandla kwabasebenzisi bemizi mveliso.
Imitha yombane yesigaba esinye yamandla emveliso yokulinganisa amandla mveliso entsha eveliswe kwaye iveliswe yinkampani yethu ngokobuchwephesha be-GB / T17215.321-2008. Le mveliso isebenzisa imijikelezo emikhulu edityanisiweyo kunye neendlela zeSMT, kunye nemisebenzi efana nokulinganisa amandla ombane, ukuqhubekeka kwedatha, ukujonga ixesha lokwenyani, kunye nokusebenzisana kolwazi.
Isigaba sesithathu se-wire-wire / sigaba sesithathu semitha ye-enethiwekhi yindawo yesekethe enkulu edityanisiweyo, kusetyenziswa itekhnoloji yokuvavanya isampulu yedijithali kunye nenkqubo ye-SMT, eyilelwe kwaye yenziwa ngokokusetyenziswa kombane okwenyani ngabasebenzisi bemizi-mveliso. Ihlangabezana neemfuno ze-GB / T 17215.301-2007 ， DL / T 614-2007 kunye ne-DL / T645-2007 .Izi mfuno zinokuguqulwa ngokweemfuno zomsebenzi.